ရန်ကုန်အတွင်းအိမ်ခြံမြေခြံ |ရောင်းရန် နှင့် ဌားရန်အိမ်ခြံမြေခြံ
17449 ရှာထားသည့်ရလဒ်များ ရန်ကုန်အတ�... နှစ်သက်သောအချက်များကို အခြေခံ၍ ရှာဖွေရန်
စီမံကိန်းအသစ်များ တိုက်ခန်း ကွန်ဒိုအခန်း လုံးချင်းအိမ် မြေကွက် လုပ်ငန်းသုံး ရန်ကုန် (17449)မန္တလေး (210)ပဲခူး(အရှေ့) (63)ရှမ်း(တောင်) (16)ဧရာဝတီ (13) ကရင် (1)စစ်ကိုင်း (6)တနင်္သာရီ (1)ပဲခူး(အနောက်) (3)မွန် (3)ရခိုင် (7)ရှမ်း (မြောက်) (5)နေပြည်တော် (9)
ရန်ကုန် (17449) 1+
Land Size (ft²) - 1+
Living area (ft²) - ပုံဖြင့်သာ	အသိအမှတ်ပြုထားသော ရောင်းချသူများသာ	ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ	အိမ်ခြံမြေခြံဈေးနှုန်း :
Air conditioning (772)Lift (385)Gas heating (121)Pay TV access (74)Floorboards (56) Alarm System (47)Broadband internet available (40)Built-in wardrobes (50)Dishwasher (6)Ducted cooling (4)Ducted heating (19)Ducted vacuum system (3)Ensuite (40)Fireplace (1)Gym (7)Hydronic heating (2)Indoor spa (6)Intercom (53)Open fireplace (28)Split-system heating (5)
Balcony (3023)Secure parking (239)Open car spaces (180)Garage (176)Carport (92) (1)Courtyard (1)Deck (39)Fully fenced (18)Garden (73)Outdoor entertaining area (1)Remote garage (1)Swimming pool (51)Tennis court (3)
Water tank (3382)Energy efficiency rating - Medium (18)Energy efficiency rating - High (17)Solar hot water (14)Grey water system (7) Energy efficiency rating - Low (3)Solar panels (7)
Pets Allowed (11821)River View (211)Water View (61)Hill/Mountain View (49)Disability Features (48) Ocean View (4)Waterfront (19)
လူကြည့်အများဆုံးစာရင်းများ‎	ရက်စွဲ ( အသစ် မှ အဟောင်း သို့)‎	ရက်စွဲ ( အဟောင်း မှ အသစ်သို့)‎	ဈေးနှုန်း (အနိမ့် မှ အမြင့်သို့)‎	ဈေးနှုန်း (အမြင့် မှ အနိမ့်သို့)‎	1
နောက်ထပ် ကား ကံစမ်းမဲပါဝင်တဲ့ တာမွေက ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်း Yangon Region, ရန်ကုန်, တာမွေ
ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
Premium Premium Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, တာမွေ ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Show Details Shangri-la Serviced Apartments ( ကန်တော်ကြီးကန်အနီး ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်) Yangon Region, ရန်ကုန်, မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်
Premium Premium Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Show Details န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊လှိုင်သာယာ ( ချင်းစုမြန်မာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) Yangon Region, ရန်ကုန်, လှိုင်သာယာ
Premium Premium Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, လှိုင်သာယာ ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Show Details အမှတ်(၁၆၈)၊ဇေယျာသိဒ္ဒိလမ်း၊ကြည်စုရပ်ကွက်၊ဒေါပုံရှိဆောက်လုပ်ပြီး ငါးလွှာ၊နှစ်ခန်းတွဲတိုက် Yangon Region, ရန်ကုန်, ဒေါပုံ
Premium Premium Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, ဒေါပုံ ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Show Details ဗန္ဓုလလမ်း ( မန္တလေးလမ်း )၊ ၃၀ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြောက်ပိုင်း ရှိရောင်းမည့် ဆောက်လုပ်ဆဲကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ Yangon Region, ရန်ကုန်, ဒေါပုံ
Premium Premium Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, ဒေါပုံ ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Show Details Elegant Villa with Big Courtyard for Rent Yangon Region, ရန်ကုန်, သဃန်းကျွန်း
~ 44.0 Lks 445 အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
Yangon Region, ရန်ကုန်, သဃန်းကျွန်း ရှိ လုံးချင်းအိမ်များ ~ 44.0 Lks 44 Show Details Merchant Suite ( ၄၉ လမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့် ) Naing Group Construction Yangon Region, ရန်ကုန်, ဗိုလ်တစ်ထောင်
Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, ဗိုလ်တစ်ထောင် ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Show Details ဗဟန်း၊ကမ္ဘောဇလမ်းအတွင်းငှားရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ် Yangon Region, ရန်ကုန်, ဗဟန်း
60.0 Lks 325 အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
Yangon Region, ရန်ကုန်, ဗဟန်း ရှိ လုံးချင်းအိမ်များ 60.0 Lks 32 Show Details သံလွင်ကွန်ဒို၊ Green Vision Construction Co.,LTD Yangon Region, ရန်ကုန်, ဗဟန်း
Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, ဗဟန်း ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Show Details Junction 8 Condo ၊ မရမ်းကုန်း မြို့ နယ် အတွင်းရှိငှားမည့် 1350 စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒိုအခန်း Yangon Region, ရန်ကုန်, မရမ်းကုန်း
18.0 Lks 424 အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
Condo in Yangon Region, ရန်ကုန်, မရမ်းကုန်း 18.0 Lks 42 Show Details မင်းနန္ဒာအိမ်ရာအတွင်းရှိ RC ၂ ထပ်တိုက်ရောင်းရန်ရှိသည်။ Yangon Region, ရန်ကုန်, တာကေတ
13,000.0 Lks 4315 အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
Yangon Region, ရန်ကုန်, တာကေတ ရှိ လုံးချင်းအိမ်များ 13,000.0 Lks 43 Show Details Shine Condo ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ် အတွင်းရှိရောင်းမည့် 2400 စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒိုအခန်း Yangon Region, ရန်ကုန်, မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်
4,100.0 Lks 434 အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
Condo in Yangon Region, ရန်ကုန်, မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် 4,100.0 Lks 43 Show Details လှည်းတန်း၊ကမာရွတ်ရှိရောင်းမည့် ဇေယျာသီရိကွန်ဒိုအခန်းများ Yangon Region, ရန်ကုန်, ကမာရွတ်
Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, ကမာရွတ် ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Show Details ရွှေပိုးအိမ်ကွန်ဒိုစီမံကိန်း (MKT Construction Co.,LTD) Yangon Region, ရန်ကုန်, လမ်းမတော်
Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, လမ်းမတော် ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Show Details ရွှေဟင်္သာကွန်ဒို လှိုင် မြို့ နယ် အတွင်းရှိငှားမည့် 2000 စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသောကွန်ဒိုအခန်း Yangon Region, ရန်ကုန်, လှိုင်
50.0 Lks 323 အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
Condo in Yangon Region, ရန်ကုန်, လှိုင် 50.0 Lks 32 Show Details 1
နောက်ထပ် Condo in Yangon Region, ရန်ကုန်, ကမာရွတ် ~ 17.0 Lks 32 အပြည့်အစုံဖော်ပြပါ
Condo in Yangon Region, ရန်ကုန် 25.0 Lks 33 အပြည့်အစုံဖော်ပြပါ
Developments in Yangon Region, ရန်ကုန်, ဗိုလ်တစ်ထောင် ဈေးနှုန်းသိရှိရန်ရောင်းချသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ အပြည့်အစုံဖော်ပြပါ
Yangon Region, ရန်ကုန်, သဃန်းကျွန်း ရှိ လုံးချင်းအိမ်များ ~ 44.0 Lks 44 အပြည့်အစုံဖော်ပြပါ
You never want to miss any New Offer
Set Email Alert based on this search criteria
Set alert အီးမေးလ် ဖြင့်အသိပေးခြင်းရရှိသည်။
Yes, I wish to receive occasional emails about special offers, new listings and exclusice promotions. I can cancel my subscription at any time. ပေးပို့သည်
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြို့ ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့  မြို့ တော်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ နေပြည်တော်ကို မြို့ တော်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့် ရန်ကုန်မှာပဲ အချက်အချာကျတဲ့ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ၊ လုပ်ငန်းများ တည်ရှိနေဆဲမုိ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအချက်က ရန်ကုန်ကို မြန်မာပြည်မှာ လူနေအထူထပ်ဆုံး မြို့ တစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ်။ မြို့ နယ်ပေါင်း ၃၃ ခုရှိပေမယ့် မြို့ နယ် ၂၀ ကျော်လောက်ကိုပဲ ရန်ကုန်ရဲ့  မြို့ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာပဲ။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကြိမ်းသေပါတဲ့ မြို့ များ ကတော့ ကမာရွတ်၊ စမ်းချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ဗဟန်း၊ တာမွေ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ဒဂုံ၊ မရမ်းကုန်း၊ လှိုင်၊ လသာ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ တောင်ဥက္ကလာ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဟာ တကယ်နေချင်စရာ မြို့ လေးတစ်ခုပါပဲ။ အကြောင်းကတော့ ရန်ကုန်ဟာ အောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေ၊ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ထုစစ်လိုတဲ့ လူငယ်၊လူကြီး အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးသော နေရာဒေသ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုလည်း ကောင်းပါတယ်။ အပူပိုင်းဒေသလို့ဆိုပေမယ့် ဆောင်းရာသီမှာလည်း အအေးဓာတ်ရပါတယ်။ မိုးရာသီမှာလည်း မိုးများများ ရွာတာမို့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်း မြို့ အစွန်တွေဘက်မှာ ဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ အိမ်၊ခြံ၊မြေ ဈေးကွက်
အိမ် ခြံ၊ ၊မြေ တိုက်ခန်း နဲ့ ကွန်ဒို ဈေးကွက်ကတော့ ရန်ကုန်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဈေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ အကြောင်းကတော့ လူနေထူထပ်ခြင်းကြောင့်ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် အရောင်းအဝယ် အရမ်းများတာကြောင့်လည်း ဈေးက တက်မြဲတိုင်းတက်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ဝယ်မနေနိုင်တာတောင် ငှားနေတာကလည်း ရန်ကုန်ရဲ့ အလေ့အထပါပဲ။ ရန်ကုန်ရဲ့  လူဦးရေ တစ်ဝက်လောက်က အိမ်အပိုင် ရှိသူများ ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ဝက်လောက်ကတော့ ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်တယ်ဆိုတာ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းလို့ လာရောက်သူများဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ ကျတော့လည်း ငွေကြေးအဆင်မပြေလို့ ရန်ကုန်မှာ အတည်နေပေမယ့် အိမ်အပိုင် မရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သိန်း ဆယ်ဂဏန်းလောက် ရှိရင် ရန်ကုန် မြို့  အစွန်တွေဘက်မှာ၊ မြို့ သစ်တွေဘက်မှာ မြေကွက်ဝယ်ခြင်းကလည်း ရန်ကုန်နေပြည်သူတို့ရဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေဘက်မှာလည်း မြေဝယ်၊ ဂိုဒေါင်ဝယ်ခြင်း၊ ငှားခြင်း လုပ်ငန်းများ ခေတ်စားပါတယ်။ နေထိုင်ချင်စရာ ဖြစ်ရခြင်း
ရန်ကုန်က အားလုံးစုနေပါတယ်။ အားလုံးဆိုတာ နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၊ ပညာရေး လုပ်ငန်း၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်း အပြင် အခြားသော လုပ်ငန်း များ စုဝေးရာ နေရာဒေသတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာ ပေါင်းစုံ အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေကြတဲ့ မြို့ ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လူနေထူထပ်တော့ ကားကြပ်ပါတယ်။ ကားကြပ်တာ တစ်ခုက ပြောစရာ ဖြစ်နေပေမယ့် အိမ်ပြန်ရောက်လို့ မိသားစုနဲ့ နားလိုက်ရတဲ့အခါ တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းမှုတွေ ပျောက်သွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ကြ၊ လစာထုတ်ကြ၊ စရိတ်တွေ မျှသုံးကြ၊ လှူကြ၊တန်းကြနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးဟာ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ၂၀၁၂ ကစလို့ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများက ရန်ကုန်ကို စီးပွားရေး လုပ်ချင်စရာ အကောင်းဆုံး မြို့ များထဲမှာ တစ်ခုအထိသို့ ဖြစ်လာစေခဲ့ ပါတယ်။ ဒီတော့ ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်ဖို့ ရွေးချယ်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု တစ်ခုပါပဲ။ ရောင်းဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဝယ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ငှားဖုိ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်များကို House.com.mm မှ အားလုံး အရည်အသွေး စစ်ထုတ် တင်ပေးထားတာမို့ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေဖို့ မျော်လင့် ပါတယ်။ .
အခြားသော ရန်ကုန် အတွင်းရှိ အိမ်ခြံမြေများ
စီမံကိန်းအသစ်များ ၊ ရန်ကုန်တိုက်ခန်း ၊ ရန်ကုန်ကွန်ဒိုအခန်း ၊ ရန်ကုန်လုံးချင်းအိမ် ၊ ရန်ကုန်မြေကွက် ၊ ရန်ကုန်လုပ်ငန်းသုံး ၊ ရန်ကုန် 'အိမ်ခြံမြေ' - 'ရန်ကုန်' ရှိ ရောင်းရန်၊ ငှားရန်
အိမ်ခြံမြေ ရန်ကုန် ၊ Buyအိမ်ခြံမြေ ရန်ကုန် ၊ Rent ရန်ကုန် တ၀ှမ်းရှိ အိမ်ခြံမြေစာရင်းများ
တိုက်ခန်း ၊ ရန်ကုန်မြေကွက် ၊ မန္တလေးစီမံကိန်းအသစ်များ ၊ ပဲခူး(အရှေ့)လုံးချင်းအိမ် ၊ ရှမ်း(တောင်)လုံးချင်းအိမ် ၊ ဧရာဝတီတိုက်ခန်း ၊ နေပြည်တော်ကွန်ဒိုအခန်း ၊ ရခိုင်မြေကွက် ၊ စစ်ကိုင်းလုပ်ငန်းသုံး ၊ ရှမ်း (မြောက်)စီမံကိန်းအသစ်များ ၊ ပဲခူး(အနောက်) အကြောင်းအရာ
အ်ိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အစီရင်ခံစာ (English)
အ်ိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အစီရင်ခံစာ (Burmese) ၀န်ဆောင်မှု
ရှာဖွေမှုအများဆုံးစာရင်း	မှတ်ပုံတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာ နှင့် အသိပေးခြားများ အတွက်:
© 2014 RS-C Internet Services Ltd. All rights reserved. Material may not be published or reproduced in any form without prior written permission.
Download House.com.mm App!